Social Media နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထူးခြားလဲ။ | Martech Zone
Social Media နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထူးခြားလဲ။
စနေနေ့, ဧပြီ 2, 2011 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2011 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါအကြောင်းပြချက်များထဲမှဖော်ပြခဲ့တယ် လူမှုမီဒီယာပျက်ကွက်ခဲ့သည် စျေးကွက်သမားတော်တော်များများကတော့မှော် algorithm ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်လို့ပါ။ ငါမှော်အလဂိုရီသမ်တစ်ခုရှိသေးသည်ဟုမထင်သေးပါ။ သို့သော်ယခုသီတင်းပတ်ကုန်လွန်ပြီးနောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုငါညွှန်ပြနိုင်သည်။ င်း အားနည်းချက်.
ဒီလဟာကြမ်းတမ်းလွန်းတယ် လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကအထက်တန်းကျောင်းမှသူငယ်ချင်းကောင်းတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်။ မနေ့ကငါတို့ဘိုးဘေးမိသားစုကိုငါသင်္ဂြိုဟ်လိုက်တယ်။ ဒေါက်ဂလပ် Morley။ ရှေးရှေးတွေမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်အဘိုးအဘွားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့အဖိုးကထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ သူသည်ကနေဒါတော်ဝင်စစ်တပ်တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ သူသည်ပေါက်ကွဲကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးဗိုလ်ကြီးရာထူးတွင်အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များမှုမရှိသောအချိန်တွင်သူသည်လှပသောဆံပင်ရွှေရောင်ဂျူးအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သောကျွန်ုပ်၏အဖွား Sylvia ကိုလက်ထပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ငါ့အဖွားလည်းထူးခြားခိုင်မာသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူမကွယ်လွန်ခင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိမိသားစု၏တိတ်ဆိတ်သောမိသားစုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဘိုးသည်ဥရောပတစ်ခွင်တွင်အမှုဆောင်စဉ်ကျွန်ုပ်၏အဖွားသည်အောင်မြင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါ့အဖိုးကငါ့အဖွားကိုကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ငါပေါ့ပေါ့တန်တန်မပြောပါဘူး။ လှပသောလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု ၅၈ နှစ်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်၏အဘိုးကသူ၏ဇနီးကိုဆုံးရှုံးသောအခါသူကထိုစာကိုရေးခဲ့သည် သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျံသန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့သောအတောင်ပံများကိုဖြတ်ပစ်လိုက်သည်။ ကိုယ့်ဇနီးကိုကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီးအကြွင်းမဲ့ချစ်ခင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငါတွေ့ဖူးတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။
သူမကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်အဖွားကစောင့်ရှောက်ဖို့အခွင့်အရေးတိုင်းကိုသူ့အဖိုးကလိုက်ရှာခဲ့တယ်။ သူသည်သူ့ကိုယ်ကျောပြproblemsနာများနှင့်ကျန်းမာရေးပြwithနာများဖြင့်ပင်တွန့်ဆုတ်ခဲ့သည်။ အမှုအရာကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့တယ်သောအခါ, သူမတစ် ဦး hospice အတွက်ထားတော်မူ၏။ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်သူမဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူမကြိုက်ဘူး၊ သူကသူမ၏အိပ်ရာနေ့နှင့်ညဉ့်အနားမှာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကရှေးရှေးသူမရဲ့လက်သည်းများနှင့်ဆံပင်ကိုလုပ်ဖို့လာလာတယ်။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်၏တိုတောင်းသောဘာမျှမဖြစ်ခဲ့သည်။
ဈာပနအခမ်းအနားမှာအဘိုးတို့ထိမိခဲ့တဲ့လူအများနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်အဘိုး၏အိမ်ကိုဂရုစိုက်သောအင်္ဂလိပ်စကားမပြောသောဥယျာဉ်မှူးကဲ့သို့ပင် ကျွန်တော့်အဘိုးကအဲဒီလူရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ သူ၏မြေးကိုအော်ဟစ်။ သူသည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမျှ ပို၍ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းမရှိဖူးဟုသူပြောခဲ့သောအာဖရိကန်အမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူ့ရဗ္ဗိနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော့်အဘွားဆုံးပြီးတဲ့နောက် (သူဟာပရိုတက်စတင့်) ဖြစ်နေပေမယ့်သူနဲ့ဆက်လေ့လာခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူများသည်သူတို့၏ ၀ မ်းနည်းကြောင်းကိုလာရောက်ပို့ဆောင်သူများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Mason လာ။ သူတို့ရဲ့အခမ်းအနားအပ်ပေးတော်မူ၏ ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ American Legion မှအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး သည်အကြီးမြတ်ဆုံးမျိုးဆက်မှပျောက်ဆုံးသွားသောအခြားဝါရင့်တစ် ဦး အားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အဘိုးကိုသူ့ဝတ်စားဆင်ယင်ဝတ်စုံအောက်မှာမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းပြက်ရယ်ပြုသူ၊ သူနိုးသည့်အချိန်တွင်သူတောင်းဆိုသည့်တံခါးသော့ခလုတ်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည် (သူသည်မြေးအား၎င်းကိုကြိုးတပ်ချမည့်အချိန်၌သူကကြိုးတပ်ရန်သွားမည်ဟုပြောခဲ့သည်) အမေကသုသာန်ကိုသွားခဲ့တယ်။ အဆိုပါ bagpiper ကစားပြီးနောက် ဘုရင်မကိုဘုရားသခင်ကယ်တင်တော်မူပါ နှင့် နောက်ဆုံးစာမူ... အ bagpipes တစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် rendition နှင့်အတူတက် lit ဟာаваနာဂလာ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရွှင်လန်းစွာရယ်မောခဲ့ကြသည်, ငါတို့ရှိသမျှသည်မျက်ရည်ကျသွန်း ... ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြုံးပြီးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လူအားနှုတ်ဆက်ဟုပြောသည်။
ကျွန်ုပ်၏အဘိုးဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့သွားကြောင်းရေးသားစဉ်ကရာပေါင်းများစွာသောလူတို့သည်မှတ်ချက်ပေးရန်အချိန်ယူခဲ့ကြသည်။ ငါအီးမေးလ်များ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ, tweets, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်စုများရေလွှမ်းမိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်မပါ ၀ င်ခဲ့ဘူး။ မိသားစုဟာအခုအချိန်မှာအဓိကသော့ချက်ဖြစ်နေပြီးအမေ (တစ် ဦး တည်းသောကလေး) ကိုထောက်ပံ့ခြင်းကငါ့အာရုံကိုအဓိကထားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်နောက်လိုက်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုအလွန်ထောက်ခံခဲ့ကြသည် ခဏပွဲရပ်ခြင်း လူမှုရေးဖြစ်ခြင်းမှ။ ငါသင်တို့ထံမှရှေးရှေးငါဘယ်လောက်ဝေးလွင့်စကားမပြောနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါစာနာမှုသို့မဟုတ်စာနာဘို့ဤအရာတစုံတခုကိုမျှရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ... ငါတတျနိုငျသ, ငါတိတ်ဆိတ်စွာငါသည်အဘယ်ကြောင့်ရှေးရှေးသင်နှင့်အတူမျှဝေချင်ရုံလမ်းလျှောက်ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်အဖိုး၏ဘဝလိုအပ်ချက်များသည်ဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းမဟုတ်၊
ဒါ့အပြင်လူမှုရေးမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထူးခြားမှုရှိမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်လုပ်ထားပါတယ် အစဉ်မပြတ်ငါစကားလုံးနှင့်အတူကြမ်းတမ်းသောအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ် စေ့စပ်ထားခြင်း... ဒါဟာကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအသံမှစတင်ခဲ့သည်။ အားနည်းချက် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနဲ့အတူတူမဟုတ်ဘူး။ ဆန္ဒရှိပါတီနှစ်ခုအကြားစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်ပျက်သည်။ ပါတီတစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်သောအခါအားနည်းချက်ရှိသည်။ အားနည်းချက်သည်သင့်အားမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၊ သို့သော် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာအားနည်းချက်သည်အခြားဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများမပံ့ပိုးနိုင်သည့်ပရိသတ်နှင့်အဆင့်တူဆက်သွယ်မှုကိုလမ်းဖွင့်ပေးသည်။ အားနည်းချက်ရှိခြင်းကိုမည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံတွင်မဆိုရေးသားထားခြင်းမရှိပါ။
Preview: Google Analytics ဗားရှင်း ၅
ဧပြီ 2, 2011 မှာ 9: 00 AM
ငါ့ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ၀ မ်းနည်းမှုက ole သူငယ်ချင်း။ မင်းရဲ့အဘိုးဟာအံ့သြလောက်အောင်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လိုအသံထွက်တယ်။ ငါသူ့ကိုတွေ့ခွင့်ရချင်တယ်။ သင်သည်သင်၏အဘိုးအဘွားကိုသိရန်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ငါငယ်ငယ်တုန်းကမှတ်မိဖို့မသေတော့ဘူး ဒါကြောင့်အမှတ်တရများမြတ်နိုး။
ဧပြီ 2, 2011 မှာ 2: 55 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BB! သူဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကနေဒါရဲ့မျိုးချစ်တစ်ယောက်ပါ။
ဧပြီ 2, 2011 မှာ 9: 42 AM
ငါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်နှစ်ပေါင်း 30 ခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်မှုရှိမှသာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အဲဒါကိုမှော်ကျည်ဆန်အဖြစ်မကြာခဏဆက်ဆံလေ့ရှိတာကိုကျွန်တော်ပျော်ရွင်မိသည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်စစ်မှန်သောဆက်သွယ်ရေးမရှိပဲ၎င်းသည်အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်သည်။ နောက်လိုက်အရေအတွက်သည်ထိုညှိနှိုင်းမှု၏အရည်အသွေးထက်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။